Gaandi & Axmed Madoobe oo heshiis wada gaaray | Xisbiga Xuriyada (The People Of Freedom)
Gaandi & Axmed Madoobe oo heshiis wada gaaray
Wararka naga soo gaaraya Dhanka Magaaladda Kismaayo ayaa sheegaya in Magaaladaasi ay gaaren wafdi uu hogaaminayay Guddoomihana Ururka Azania ahna xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cabdi Gaandi oo shalay safar ku tagay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose.
Wararka ayaa Sheegaya in Prof Gaandi uu kulan Saacado qaatay la qaatay Hoggaamiye kooxeedka Raaskambooni Axmed Madoobe, kulanka Prof Gaandi iyo Axmed Madoobe oo aan la garaneynin waxa uu ku saabsan yahay ayaa waxa ay wararku sheegayan in Labadaasi Masuul ay kawada hadleen Qaabka ugu sahlan ee labada urur xiriir wacan ku yeelan karaan si xukuumadda Somalia loogu indhatiro in Kismaayo loo dhan-yahay.
Kulanka labada Masuul ayaa sidoo kale imaanaya xili Xukuumadda Somalia ay dooneyso in halkaasi ay ka sameyso maamul waxaana arintaasi lagu wadaa in Prof Gaandi uu kala hadlo Axmed Madoobe in maamulka Kismaayo loo Magacabo inuu Guddoomiye Guud ka noqodo Magaaladda Kismaayo hayeeshee waxaa jira Muran kataagan in Axmed Madoobe laga dhigo Guddoomiyaha Maamulka Magaaladda Kismaayo.
Dhanka kale Prof. Gaandi waxa uu ka mid yahay saxiixayaashii IGAD ee maamul u sameynta gobolada Jubbooyinka, wuxuuna qeyb ka yahay wafdiga u gogol-xaari doona maamul u sameynta gobooladaasi, warku wuxuu intaasi ku darayaa inuu la kulmay taliyayaasha ciidamada Raaskambooni iyo madaxda ciidanka dowladda, kuwaas oo uu u sheegay inaysan dheg jalaq u siinin wararka raqiiska ah ee ka soo yeeraya dadka qaarkiis, isla wuxuuna ku dhiirageliyey inay howshooda sii wataan.
Ugu dambeyntii Prof Gaandi iyo Axmed Madoobe ayaa mar qurah kasoo wada baxay Qolkii shirka uga socday waxaana meesha ka muuqaneyso in Prof Gaandi uu u jaran-jeero dhanka Axmed Madoobe.
Baarlamaanka Soomaaliya Oo Meel Mariyay Xukuumada Cusub Riyada Keenya ee Kismaayo!